Fahad oo ku fashilmay kala jabinta Guddiga FEIT | KEYDMEDIA ENGLISH
Fahad oo ku fashilmay kala jabinta Guddiga FEIT
Taliyihii hore ee hay’adda Nabad-sugidda iyo Sir-doonka Qaranka, eedeysane, Fahad Yaasiin, ayaa ku fashilmay inuu arbushaad ka dhex abuuro Guddiga doorashooyinka heer federal.
MUQDISHO, Soomaaliya – Xogo hoose oo Keydmedia Online ka heshay xubno ka tirsan Guddiga doorashooyinka heer federal, ayaa sheegaya inuu fashilmay isku daygii koobaad ee Fahad Yaasiin ku doonayay inuu ku kala jabiyo Guddiga, kadib markii [FEIT] ka hor timid doorashadiisii.
Axaddii, war qoraal ah oo ka soo baxay, Guddiga heer Fedaraal, ayaa wax kama jiraan looga soo qaaday doorashada kursiga tirsigiisu yahay HOP086, halka uu Guddoomiyaha Guddigaas, Muuse Geelle Yuusuf , uu Isniintii shaly si cad u sheegay in aysan aqoonsaneyn is boqridda Fahad.
Tallaabadaas waxa ay sababtay in agaasimihii hore ee NISA, Fahad Yaasiin, isku dayo inuu labo garab u kala jabiyo Guddiga FEIT, hayeeshee, waxaa qorshihiisa ka hor yimid xubno ka tirsan Guddiga oo uu ku jiro Guddoomiye ku xigeenka guddiga doorashada heer Fedaraal Mowliid Mataan.
Fahad Yaasiin ayaa doonaya inuu Abukaate Mowliid Mataan Salaad iyo Xog-hayaha Guddiga u adeegsado meel marinta najiijada doorashadiisii boobka ahayd ee [Axad] 20/02/2022, ka dhacday Baladweyne, iyaga oo saxaafadda la hadlaya, hayeeshee, qorshahaas ayaa fashilmay.
Xogo hoose, waxa ay sheegayaan in shaqsiyaad wakiil ka ahaa Fahad, kulan la qaateen Guddoomiye ku xigeynka iyo Xog-hayaha Guddiga, xalay xilli danbe, yeelkeede, aysan waxba ka soo bixin kulankaas, maadaama ay labada masuul, wakiillada ku wargaliyeen in aysan diyaar u ahayn carqaladeynta doorashada.
Guddiga doorashooyinka heer Fedaraal FEIT, ayaa la rumeysan yahay in ay ku daaban yihiin Xaafiiska Ra’iisul Wasaaraha, oo khilaaf xooggan kala dhaxeeyo Fahad, maadaama Rooble, ka raacdeeyay shaqadii hoggaanka NISA, oo muddada uu ku dhibaateynayay bulshada.
Fahad Yaasiin, ayaa ugu horreeya xubno ku eedeysan gobood-fallo waaweyn oo ay galeen shanti sano ee la soo dhaafay, kuwaas oo doonaya in ay gabbaad ka dhigataan Golaha Shacabka, si ay kaga badbaadaan in sharciga la hor geeyo.
HOP086, waxaa baarlamaankii 10-aad ku fadhiyay Faarax Sheekh Cabdulaqaadir, oo siyaasad ahaan ku dhow Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud, Faarax, wuxuu ka mid yahay baratamayaasha kursiga, hayeeshee, wuxuu caqabad kala kulmaya madaxda Hirshabeelle.